Covid-19 ကာကွယ်ဆေး -
အခုတလော မြန်မာပြည်ကိုရောက်လာဖို့ရှိတဲ့ Covid-19 ကာကွယ်ဆေး Sinopharm နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အမေးများသောအကြောင်းအရာများကို ဝေမျှပေးပါရစေ။
Q: Sinopharm ထိုးဖို့ အသက်အကန့်အသတ်ရှိပါသလား?
A: အသက် ၁၈နှစ် နှင့်အထက်များ ထိုးလို့ရပါတယ်။
Q: Sinopharm ကို ဘယ်လိုထိုးရတာပါလဲ?
A: Sinopharm ကို 0.5ml အသားဆေးထိုးရမှာဖြစ်ပြီး ၂ကြိမ်ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအကြိမ်နဲ့ ဒုတိယအကြိမ်ကို ၃ပတ်ကနေ ၄ပတ်ခြားပြီးမှ ထိုးရမယ်လို့ WHO က အကြံပြုထားပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ်ကို ၃ပတ်ထက်စောပြီးထိုးမိခဲ့လျှင် နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ထိုးဖို့မလိုအပ်ပါ။ ဒုတိယအကြိမ်က ၄ပတ်ထက်နောက်ကျနေပြီဆိုရင်တော့ အမြန်ဆုံးထိုးနိုင်တဲ့အချိန်မှာထိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဆေးကာကွယ်မှုအပြည့်အဝရရှိရန်အတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးသူတိုင်း ၂ကြိမ်ပြည့်အောင်ထိုးပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Q: Sinopharm က Covid-19 ကို ဘယ်လောက်ကာကွယ်လဲ? အခုဖြစ်နေတဲ့ delta variant ကိုကော ကာကွယ်နိုင်လား?
A: Sinopharm ရဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါ အပေါ်ကာကွယ်နိုင်စွမ်းက ၂ ကြိမ်ထိုးပြီးရင် ၇၉ % ရှိပါတယ်။ ပြင်းထန်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတော့ ၉၀% ထိလျော့ချနိုင်ပါတယ်။ Sinopharm ရဲ့ Delta variant အပေါ်ကာကွယ်နိုင်မှုက တခြားကာကွယ်ဆေးတွေလောက်မမြင့်မားပေမယ့် ရောဂါပြင်းထန်မှုကိုတော့ လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားရသူတိုင်း ကာကွယ်ဆေး မထိုးထားကြသူတွေ ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့တွေ့ရှိချက်များမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
A: မရှိပါ (သို့သော် WHO မှကောက်ခံထားသော data များတွင် နာတာရှည်ရောဂါများအခံရှိသူများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင့် အသက် ၆၀နှင့်အထက်ပုဂ္ဂိုလ်များအား ထည့်သွင်းစမ်းသပ်ထားခြင်း မရှိပါ)
Q: ဘယ်လိုလူတွေမှာ Sinopharm ကို မထိုးသင့်ဘူးလဲ?
A: ဆေးမတည့်မှုဖြစ်ပွားဖူးသူများ၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးရင်း ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်ဖူးသူများ၊ အသက် ၁၈ နှစ်အောက်များ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ (ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များမှာ ကာကွယ်ဆေးမှ ရရှိနိုင်မယ့်အကျိုးကျေးဇူးများနဲ့ ကလေးအပေါ်သက်ရောက်နိုင်မှုများအား စမ်းသပ်ထားခြင်းမရှိသေးတာကြောင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဟာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ဆိုးကျိုးများထက် အကျိုးပိုရှိမယ်ထင်ရင် ထိုးဖို့စဉ်းစားသင့်ပါတယ်)၊ ဖျားနာသူများ (ကိုယ်အပူချိန် 38.5C/101F နှင့်အထက်ရှိသူများ)
Q: ဆေးထိုးပြီးနောက် အကျိုးဆက် လက္ခဏာများ (side effect) ရှိပါသလား?
A: ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ကိုယ်လက်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ အဖျားအနည်းငယ်တက်နိုင်ခြင်း၊ ဆေးထိုးထားသည့်နေရာတွင် နာကျင်ခြင်းစတဲ့ side effect များရှိနိုင်ပါတယ်။
Q: Side Effect များကို ပြန်ကုဖို့လိုပါသလား?
A: အထက်ဖေါ်ပြပါ side effect တွေဟာ ရက်အနည်းငယ်လျှင် အလိုအလျောက်ပျောက်ကင်းသွားမှာပါ။ ရက်အနည်းငယ်နေလို့မပျောက်ဘဲ ပိုမိုဆိုးရွားလာတယ်၊ ရှားရှားပါးပါး ပြင်းထန်တဲ့ဓါတ်မတဲ့မှုလက္ခဏာများ (အရေပြားယားယံခြင်း၊ အနီကွက်များပေါ်လာခြင်း၊ အသက်ရှုရခက်လာခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်းစသဖြင့်) ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ နီးစပ်ရာဆေးရုံဆေးခန်းများမှာ ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Q: ကိုယ့်ဘာသာ Covid ဖြစ်ဖူးမှန်းသေချာမသိဘူး၊ ဖျားဖူးတယ်၊ အနံ့ပျောက်ဖူးတဲ့လူတွေဆိုရင် ကာကွယ်ဆေးမထိုးခင် test kit စစ်လိုက်ဖို့လိုလား?
A: စစ်ကိုစစ်ဖို့တော့ မလိုအပ်ပါ။ (test kit ဆိုတာထက် antibody ရှိမရှိ စစ်နိုင်မယ်ဆို ပိုကောင်းပါတယ်။ antibody ထွက်ပြီးသားသူတွေဆိုရင် ၆လလောက် antibody ရှိနေမယ့်အတွက် ၆လအတွင်းထပ်မံကူးစက်နိုင်မှုရှားပါးပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးအရေအတွက်သာမလောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင် မဖြစ်ဖူးတဲ့သူတွေကို ဦးစားပေးထိုးဖို့အတွက် လိုအပ်ပါက antibody ရှိမရှိ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်)
Q: Sinopharm ဒုတိယအကြိမ်ထိုးပြီး booster dose ထပ်မံထိုးရင် ကာကွယ်မှုပိုကောင်းပါသလား?
A: ဒုတိယအကြိမ်ထိုးပြီး booster dose အနေဖြင့်ထပ်မံထိုးခြင်းက အကျိုးကျေးဇူးရှိမရှိကို သက်သေပြနိုင်တဲ့ clinical evidence အလုံအလောက်မရှိသေးပါဘူး။
Sinopharm ဟာ တရုတ်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့ Covid-19 ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ sinopharm မှာ သတိပြုစရာက Beijing ကထုတ်တဲ့ BBIP-CorV နဲ့ Wuhan ကထုတ်တဲ့ Vero cells ဆိုပြီး ၂မျိုးရှိပါတယ်။ Beijing ကထုတ်တဲ့ BBIP-CorV ကတော့ Covid-19 ကပ်ရောဂါအတွက် အရေးပေါ်အခြေအနေမှာအသုံးပြုဖို့ WHO မှ အသိအမှတ်ပြုတာခံထားရပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၅၉ နိုင်ငံမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ဆေးပါ။ ဒါပေမယ့် Wuhan မှာထုတ်တဲ့ Vero cells အမျိုးအစားကတော့ WHO အသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံထားရတဲ့အပြင် တရုတ်တစ်နိုင်ငံထဲမှာသာ အသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်သတိပြုစရာက Covid-19 vaccine တိုင်းဟာ cold chain နဲ့သယ်လာမှ အာနိသင်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ထိုးမယ့်ကာကွယ်ဆေးက cold chain မပျက်သယ်ဆောင်လာတဲ့ဆေးဖြစ်နေဖို့တော့ လိုပါတယ်။ (hope.com.mm)
Aug 13, 2021 Covid 19, Health Tips